Maxaabiis Soomaali ah oo laga keenay Sechelles ayaa la gaarsiiyay magaalada Muqdiso | SAHAN ONLINE
Maxaabiis Soomaali ah oo laga keenay Sechelles ayaa la gaarsiiyay magaalada Muqdiso
MUQDISHO – Maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaarayso todoba dhalinyaro ah ayaa la geeyay magaalada Muqdisho kaddib muddo ay ku xirnaayeen Jaziirada Sechelles.
Dhalinyaradan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyay Wasiirka Caddaaladda,Taliyaha Ciidanka Asluunta Soomaaliyeed,Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo xubno ka tirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka.
Maxaabiistan ayaa lix kamid ah ay xabsigooda ku dhameysan doona dalka halka qofka kale la sii daayay oo mudada xabsiga uu soo dhameystay.
Taliyaha Ciidamada Asluubta Soomaaliya Sareeya Gaas Xuseen Xasan Cusmaan ayaa sheegay iney tallaabo wanaagsan ay tahay in dalka dib loogu soo celiyo maxaabiista Soomaaliyeed eek u xiran dalalka caalamka.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa xusay in Maxaabiis kale ay kusoo wajahan yihiin dalka si xukunkooda ay dalkooda ugu dhameystaan inta uga dhiman.
Wasiirka Caddaaladda Xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ugu dambayn sheegay iney ku mashquulsan yihiin ka Wasaarad ahaan in dalka lagu soo celiyo maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalalka dibadda.